Amaphakeji akhanyayo negesi ezinkampanini kanye nakubantu
Amaphakethe Wokukhanya Nogesi
Iminikelo yezinkampani zikagesi nezophethiloli
Izipesheli Ukukhanya negesi House
Nge-FuturEnergy, Amandla akakaze alunge kangako
Amaphakethe wokukhanya negesi wamakhaya nezinkampani
Ukukhululeka kwe ugesi kanye nemakethe yegesi e-Italy izophothulwa ngoJulayi 2020 kanti nayo izokwenyuka ugesi kanye nokunikezwa kwegesi namaphakeji. Inani labanikeli be amandla eqinisweni, imakethe izokhula kakhulu, futhi ikhulisa amathuba okusebenzisa ngokukhululekile izintela zikagesi namapakeji kagesi ngamanani ancintisana kakhulu.
Nge inkululeko yemakethe, lo amanani kagesi negesi Iziphakamiso ezivela kubahlinzeki abahlukahlukene zinemvelo ehlukahlukene futhi zingaba nezinzuzo okufanele zihlolwe ngokucophelela. Ngokuphindaphindwa kwabalingisi enkundleni, kungaba nzima ngempela ukuqhubekela phambili izintela zikagesi o ukukhanya zilungele kangcono izidingo zakho. The Imakethe yamahhala kungaba ihlathi amaphakheji adidayo nokunikelwayo.
Ngenxa yalesi sizathu Ikusasa inikeza kumakhasimende ayo izintela ezisobala, kushibhile futhi kulula kakhulu.
L'Ukunikezwa kukagesi nogesi okuhlongozwe ngu Ikusasa kuhloswe kubo bobabili abazimele kanye namabhizinisi futhi kugcotshwa okunezinhlobonhlobo ezisukela Ukunikezwa kwendlu kufinyelela kunyuso ukukhuthaza ukusetshenziswa kwe photovoltaics.
I-FuturEnergy ingumhlinzeki we izixazululo zamandla isizukulwane esisha, esihlakaniphile nesenziwe ngeziqu, ngesithembiso esibanzi esifaka ugesi, igesi yemvelo, amandla okusebenza kanye ne-Smart Building. Njalo iphakethe lamandla yakhelwe ukufeza izidingo ezithile zamabhizinisi amancane kanye naphakathi nendawo kanye nemindeni.
Ukuphathwa kwe-FuturEnergy kuneminyaka eminingi yesipiliyoni ekunikezeleni imikhiqizo nezinsizakalo kubantu abangaphezu kwezigidi ezimbili Amakhasimende webhizinisi nezokuhlala. Ukucinga okungapheli kwe emisha futhi izinhlinzeko eziningi zibonisa umbono wenkampani, ngokugxila kakhulu kwamakhasimende.
Ukuqamba kanye nokusimama kwe-Eco
Ikhasimende ngalinye leFururEnergy, noma liyimfihlo noma ibhizinisi, linokuqiniseka kokuhambisana nendlela eqhubekayo ukuncishiswa kwezindleko zamandla ngabasebenzi abakhethekile abangochwepheshe ababekelwe yena abahlale bemlandela ngenhloso yokuxazulula noma yiziphi izinkinga.
Amandla okunikezwa kwe-FuturEnergyukuncintisanaesobalakukhiyiwe
Ikhathalogi enkulu yethu Ugesi kanye nokunikezwa kwegesi amakheli:
I-Micro Business; Ibhizinisi elincane; Ibhizinisi Ephakathi e Izinkampani ezinkulu.
Konke i amaphakheji zibhekiswe futhi ziphendule kuzidingo eziningi ezahlukahlukene zezinhlobo ezahlukene zezinkampani. Phakathi kwamaphakeji ethu anikezelwe ezinkampanini nge ukusetshenziswa kuze kufike ku-20.000 kWh / ngonyaka, ungakhetha phakathi: Imakethe ye-PowerLed, Ukulungiswa kwe-PowerLed e Imakethe Yebhizinisi Lamandla. Kwabathengi Benkathi Yomhlaba, sicabange Ngokuhlinzekwa Kwemakethe Yesizini. Ku Ibhizinisi elincane okunikezwayo okulandelayo kuyatholakala: I-PMI Mercato ne-PMI Fix.
Kumabhizinisi Amaphakathi, ngokusetshenziswa okuphezulu a 50.000 kWh / ngonyaka: Imakethe ephezulu ye-PMI ne-PMI Phezulu. Futhi ekugcineni, ezinkampanini ezinkulu, i inikeza amandla faka i amaphakhejiIzinkampani ezinkulu zemakethe ezinkulu kanye nezinkampani ezinkulu zokulungisa. Ukuqedela umndeni ocebile we Amaphakeji wokukhanya nogesi, ayatholakala Izipesheli ezenziwe umsila lokho kuzohlongozwa kuwe ngemuva kokuhlolisisa okwakho izidingo zamandla kanye nezidingo zakho.
Thola elungile Ukunikezwa kukagesi negesi ikhaya lakho liyinkampani ukuthi Ikusasa inqume ukwenza lula wonke amakhasimende ayo. Akulula ngaso sonke isikhathi ukuhambisa okunikezwayo evumelana nezidingo zakho. Futhi isinqumo senziwa saba nzima nangobunzima bokubikezela ngokunembile inani lomuntu ukusetshenziswa njalo ngenyanga.
Ngenxa yalesi sizathu Ikusasa inikeza abathengi bayo eyodwa izeluleko zamandla wamahhala, Ngaphandle kwalokho amanani avikelekile, ishibhile futhi esobala.
Konke i amaphakheji Gas noLukha okunikelwe ngu Ikusasa zenzelwe ukuphendula Izidingo zamandla ukwahlukanisa okuningi, ngamanani emakethe angenakuqhathaniswa.
© 2018 ngu - FuturEnergy Rinnovabile Srl